Staff (Document Control/ Marketing) | Cho Cho Co., Ltd. ﻿
•	နေ့စဉ် ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာန၏ Below the line activities နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Promotion လုပ်ငန်းများအား ပူးပေါင်း၍ ထိရောက်အောင်မြင်အောင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Promotion ပွဲများအပြီးတွင် Report များအား သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်၍ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအခြေအနေများအား ဒု-မန်နေဂျာ ထံသို့တင်ပြနိုင်ရမည်။
•	ISO, HACCP & GMP စနစ်ကို သိရှိပြီး Document Control ပိုင်းအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Strond customer service, communication and negotiation skills.
•	Well knowledge in ISO and Document Control system.
Staff (Document Control/ Marketing) Admin, Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Cho Cho Co., Ltd. Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs FMCG Jobs in Myanmar, jobs in Yangon